KUYA KU 50 Osebenzisa KU Aloha DAILY Imigomo Nemibandela
Lokhu ukukhuthazwa azobonakala phakathi 10th – 12th-17 – 19th Novemba 2017.
I Amabhonasi ezilandelayo ziyatholakala:
Idiphozithi phakathi £ 10 & £ 19 ukuthola ibhonasi ka 10 Ibhonasi osebenzisa.
Idiphozithi phakathi £ 20 & £ 49 ukuthola ibhonasi ka 20 Ibhonasi osebenzisa.
Diphoza £ 50 noma ngaphezulu ukuze bathole ibhonasi ka 50 Ibhonasi osebenzisa.
Ukuze kusebenze osebenzisa abadlali kumele ukuqalisa Aloha
Ibhonasi osebenzisa kungathatha kufika 3 izinsuku zokusebenza kusukela ekupheleni ukukhuthazwa ukuze zifakwe kwi-akhawunti yakho. Noma yimuphi ambikele kusukela osebenzisa anikezwa Ibhonasi Izimali.
Ibhonasi Izimali baphathe imfuneko babheja engosini ye 30x isamba ibhonasi lemali yakho efanele futhi kumele sibonane ngaphambili yimuphi ambikele eziguqulelwa imali eneziqongo.
Abadlali ayakhunjuzwa ukuthi ibhonasi eyodwa kuphela kungaba asebenzayo nganoma isiphi isikhathi esisodwa, sicela uye ku “iphrofayela yami” kwesigaba ukubuka yonke ibhonasi kulayini wakho
Sicela ukugembula ngendlela efanele. Vakashela www.begambleaware.org ukuze uthole olunye ulwazi.